Ny ankamaroan’ny ankizivavy tsy mahalala hoe aiza no mihaona amin’ny lehilahy iray, inona no toerana ho an’ny tokan-tena sy ny toerana ahitana azy ireo. Izany dia tena mora kokoa noho ny hevitrao, ary hahita lehilahy iray izay tianao, izany no faniriany. Ato amin’ity lahatsoratra ity ianao, dia fantaro izay mba hihaona ny lehilahy na ny lehilahy na ny nofy, inona no toerana tsara indrindra mba hahita sy ny toerana ahitana azy ireo. Io safidy io dia tsara ho an’ireo ankizivavy izay tsy mikendry mba hahazatra ny mpanambola sy mitantana ny firenena. Na dia toy ny fitsapan-kevitra ankehitriny ny ankizivavy tsy tena toy ny rehefa ry zalahy manorisory ireo eny an-dalana. Noho izany ry zalahy, rehefa miatrika mafy ny valiny, koa tsy ho maika hiteny misy vehivavy eny an-dalambe. Ny lehilahy ny tenany miaiky fa ny tovovavy eo an-dalana dia tsara kokoa ny tsy hikasika. Mazava ho azy, raha tsy izy no hanome ny sasany famantarana Raha te-karena mpampakatra, mifidy ny efitrano any ho any ao amin’ny foibe.
Eny, izaho dia tsy maintsy forosety avy ho an’ny tapakila, fa izy antoka dia hihaona: any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena safidy maro Cavaliers amin’ny ambany fifaninanana Eto fotsiny ho izany, ary tonga: mba hihaona sy ny mandany fotoana. Nefa ny jiro tao eto dia afaka hitondra: matetika ny andro manaraka, ao amin’ny antoandro, dia toa, mahafinaritra ny olona omaly dia tena biby goavam-be amin’izao fotoana izao. Ary zavatra iray hafa: tsarovy foana fa vahiny ny trano fandihizana, ny ankamaroan’izy ireo dia voaendrika ho tokana, ny fifandraisana. Raha toa ny drafitra dia tsy hihoatra ny iray alina, dia mandeha mialoha, fa raha te-hahita ny olona fa ny fifandraisana avy eo dia ho tsara. Ny toerana tsara mba hihaona afaka na iza na iza. Afa-tsy eto anivon ny mpitsidika ny toerana toy izany, ny ankamaroan’ny lehilahy manambady sy malaza virijiny, fa ny ara-dalàna ry zalahy ao amin’ny Aterineto, tsy dia be. Fa izy no tena misy, araka ny hita tamin’ny antontan’isa voasoratra ara-panjakana ny fifandraisany rehefa Ny fiarahana amin’ny Aterineto. Toy izany koa angamba ianao hahazo tsara vintana, vao tokony ho mailo. Mampiseho, sarimihetsika, sy ny famelabelarana.
Eto ny lehilahy iray dime am-polony
Ny antsasany mahery amin’izy ireo dia ho tsy manam-bady, manahy be loatra momba ny asa, workaholics. Fa tsara kokoa izany noho ny mpisotro toaka na womanizers. Toy izany koa matetika toy izany koa ny zava-nitranga, angamba ny fiainana mpiara-miasa miafina any. Mpivady maro no niforona ny fifandraisana sy nihaona tao amin’ny vanin-taona mafana ao amin’ny fialan-tsasatra tany an-dranomasina. Izany dia noho ny zava-misy fa rehefa avy miasa, ny olona dia hahatsapa nahitana fahalalahana sy misokatra. Izy dia vonona ho vaovao ny olom-pantatra sy ny fifandraisana, toy ny raharaham-barotra rehetra dia vetivety ny zavatra momba ny lasa. Sasatra, koa tsy maintsy ary tia chat, na raha toa raha vao jerena ny zazalahy na lehilahy toa ny iray mitady.
Mahomby indrindra fifandraisana noforonina taorian’ny fivoriana any am-pianarana na any am-piasana. Ireo antony maro ireo, indrindra ny fianakaviana sambatra, toy ny any am-pianarana na any am-piasana nahalala samy hafa, dia ny zava-miafina rehetra, ny tsara sy ny ratsy kalitao
← Tany Filipina ho amby telo-efa-taona. Fiarahana ho an'ny sokajin-taona rehetra. Tsy manam-petra. Tena sary
Filipina Amin'ny Chat. pk →